Safiirada Qadar iyo Turkiga oo Kulmay
Hogaamiyaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya C / casiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa 3dii Janaayo 2021 kulan kula qaatay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho Safiirka Turkiga iyo Safiirka Qatar ee Soomaaliya.
Hogaamiyaha Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya C / casiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho kula kulmay Safiirka Turkiga iyo Safiirka Qatar ee Soomaaliya kadib qaraxii shalay ka dhacay deegaanka Lafoole ee duleedka Magaalada Muqdisho.
Lafta-gareen ayaa kala hadlay Safiirka Turkiga Mehmet Yilmaaz iyo Safiirka Qatar Hassan Bin Hamza weerarkii Al Shabaab ay ku qaadeen Injineero Turki ah oo ka shaqeynayay wado isku xirta caasimada Muqdisho iyo degmada Afgooye ee gobolka Sh / hoose.
Hogaamiyaha ayaa ka tacsiyeeyay dadkii ku wax yeeloobay weerarkii argagixiso ee Al Shabaab ay ka geysteen wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye taas oo sababtay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Qoraal ka soo baxay Madaxtooyada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Hogaamiyaha Koofur Galbeed Cabdicasiis Lafta-gareen, ayaa sidoo kale kala hadlay Safiirada Qadar iyo Turkiga oo si wada jir ah u fulinaya mashruucan si loo sii wado dhameystirka wadadan muhiimka ah ee isku xirta caasimada Muqdisho iyo gobolka Sh / hoose.
Hogaamiyaha Lafaha ayaa maanta ka soo laabtay safar uu ku tagay Turkiga booqasho uu ku tagay mudadii ugu dambeysay.
Sunshine ayaa Sancho ka dooraneysa Haland